Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 499760 times)
« Reply #420 on: June 10, 2011, 08:45:49 AM »
ကျောင်းသားတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ တော့မေးလိုက်တိုင်း ပြန်ဖြေတဲ့အဖြေတွေက တကယ့် ဗရုသုက္ခတွေချည်းပဲ ဒီတော့ဆရာကကျောင်းသားကို ပြောတယ်
နောက်နေ့ ကျောင်းသားက ဆရာ့ကို စာအိတ်တစ်အိတ် ကမ်းပေးတယ်
"ကျွန်တော်မရူးကြောင်း မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးဆီက ထောက်ခံစာပါခင်ဗျာ"
« Reply #421 on: June 10, 2011, 10:05:53 AM »
« Reply #422 on: June 10, 2011, 10:19:25 AM »
« Reply #423 on: June 16, 2011, 01:53:27 AM »
..မောင့်ကြောင့် အသည်းတွေကွဲနေတာ) မောင်.... .................
« Reply #424 on: June 17, 2011, 09:58:08 AM »
အိမ် ရောက်ရောက်ချင်း မေရီ့ကို အငို မျက်နှာနဲ့ မြင်လိုက်ရတော့ သူ့ခင်ပွန်း အသစ် စက်စက်လေးက ဘာများဖြစ်သလဲလို့ ပျာပျာသလဲ မေးတော့ "မောင်ရယ် .. မောင့်အတွက် ဆိုပြီး မေရီက ကြက်ပေါင်းချက်ထားတာ။ အဲဒါ ကြောင်အိမ်ထဲ သိမ်းမလို့ လုပ်နေတုန်း ဖုန်းလာတာနဲ့ စားပွဲပေါ်ထားခဲ့မိတယ်။ ဖုန်းဆက်ပြီးပြန်လာတော့ ဟင်းတွေမရှိတော့ဘူး။
အိမ်ကကြောင် အကုန်စားပြီး ထွက်ပြေးသွားတယ်" လို့ ငိုကြီးချက်မနဲ့ မေရီက သူ့ခင်ပွန်း ကို တိုင်ပါတယ်။
စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ မေရီ့ကိုခင်ပွန်းဖြစ်သူက နှစ်သိမ့်စကားဆိုတာ က "ဝမ်းနည်းမနေ ပါနဲ့ မေရီရယ် .. မနက်ဖြန်ကျရင် မောင်နောက်ထပ် ကြောင်တစ်ကောင် အသစ်ဝယ်ပေး ပါ့ မယ်"
နယူးယောက်မြို့တွင် လူတစ်ယောက်သည် မြို့စွန်ရှိ စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ကာ ၎င်းတွင်ပါလာသော သေနတ်ကိုပြ၍ အရောင်းကောင်တာမှ အမျိုးသမီး အား ရောင်းရငွေအားလုံးကို အိတ်တစ်အိတ်ထဲသို့ ထည့်ရန် ပြောသည်။
ကောင်တာတွင် အကောင်းစား အရက်တစ်ပုလင်းကိုတွေ့၍ ၎င်းအရက်ပုလင်းကိုပါ အိတ်ထဲထည့်ရန် သေနတ်သမားက ပြောရာ အမျိုးသမီးက ငြင်းရင်း
“မင်းအသက် ၂၁ နှစ်ပြည့်ပြီလို့ ငါမထင်ဘူး”ဟုပြောသည်။
ထိုအခါ သေနတ်သမားက ၎င်း၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ထုတ်ပြရာ အမျိုးသမီးက ယူကြည့်ပြီးနောက် အရက်ပုလင်းကိုပါ ထည့်ပေးလိုက်သည်။ သေနတ်သမား ထွက်ပြေး သွားသောအခါ အမျိုးသမီးက ရဲစခန်းအား ဖုန်းဆက်၍ အနုကြမ်းစီးသူ၏ နာမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့် နေရပ်လိပ်စာကို ပေး၍ ဖမ်းဆီးခိုင်းပါတော့သည်။
ဒီတော့သူက "ကျွန်တော်လား၊ ကြက်ဖတွေလဲလိုက်တယ်လေ။ ခင်ဗျားရော"လို့ မေးလိုက် တော့ အမျိုးသမီးက "အို၊ တိုက်ဆိုင်လွန်း လိုက်တာရှင်"
« Reply #425 on: June 18, 2011, 04:23:00 AM »
Quote from: u myo on June 10, 2011, 08:43:48 AM
ဖတ်ပီး အသံထွက်အောင် ရယ်မိတယ်.. အဟီး
ဒီboard က တော့ပစ်လေးတွေကို အသက်သွင်းပေးနေတဲ့ အကိုတွေ မောင်တွေ အားလုံး ကျေးဇူးပါ
မာယာ စိတ်ပင်ပန်းတဲ့ အခါ မဖတ်ရသေးတဲ့ ဟာသလေးတွေ တခုဆီ လိုက်ဖတ်ဖြစ်တယ်
« Reply #426 on: June 18, 2011, 04:56:02 AM »
Quote from: u myo on June 10, 2011, 08:40:59 AM
ကျွန်တော်လည်း...အတွင်းရေးမှုး သွားလျှောက်မလို့ ...ဒီနေ့ က စပြီး ...အီးအီး မကုန်းတော့ ဘူးဗျာ....
« Reply #427 on: June 18, 2011, 09:24:06 AM »
‘ကိုရေ . . . မနက်ဖြန် ကျွန်မတို့ အိမ်ထောင်သက် ၁၅ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ကြက်တစ်ကောင်သတ်စားရအောင်လား’
‘လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅နှစ်က ငါ့အပြစ်အတွက် ကြက်မှာ ဘာအပြစ်မှမရှိပါဘူးကွာ။’
‘မင်းဘာကြောင့် နှုတ်ခမ်းမွှေး အဲ့ဒီလောက်ရှည်နေရတာလဲ?’
‘မသိပါဘူးကွာ . . . ဆံပင် သန်ဆေးလီမ်းကတည်းက ဒီလိုဖြစ်သွားတာပဲကွာ။’
« Last Edit: June 18, 2011, 03:29:45 PM by tunaye2011 »
« Reply #428 on: June 18, 2011, 09:35:41 AM »
တစ်ခါက ရွာကိုလည်လာတဲ့ မြေးကိုအဖိုးဖြစ်သူက ပြောတယ်။
ထန်းတောတွင် အဖိုးဖြစ်သူက ထန်းရည် တစ်မြူနှင့်ဆတ်သားခြောက် တစ်ပွဲ မှာလိုက်သည်။
ဆတ်သားခြောက် နောက်တစ်ပွဲ မှာလိုက်သည်။
ထန်းရည်နည်းနည်းသောက်ပြီး အမြည်းစားရန် ကြည့်လိုက်ရာ
« Reply #429 on: June 18, 2011, 02:50:18 PM »
အမဲလိုက် မုဆိုးနှစ်ယောက်ဟာ သစ်တောအုပ်တစ်ခုထဲကို ရောက်နေပါတယ်။ အဲဒီမုဆိုးနှစ်ယောက်ထဲမှ တစ်ယောက်ကတော့ မြေပြင်ပေါ်မှာ လဲကျနေပါတယ်။ သူ့ပုံစံက အသက်ရှူနေလို့တောင် မထင်ရတော့ပါဘူး။ ပြီးတော့ သူ့မျက်လုံးတွေကလည်း ပြူးထွက်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တခြား မုဆိုးက သူ့ဖုန်းကို ထုတ်လိုက်ပြီး အရေးပေါ်ဌာနကို လှမ်းဆက်ပါတယ်။ သူက ဖုန်းကိုင်တဲ့ သူကို အရေးတကြီးဟန်နဲ့ `ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း သေနေပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘာလုပ်လို့ ရနိုင်ပါလဲ´ လို့ မေးပါတယ်။
အဲဒီအခါ ဖုန်းကိုင်တဲ့ သူက အေးဆေးစွာနဲ့ ပြန်ပြောပါတယ်။ `ဒါက လွယ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ သူ သေလား၊ မသေလားဆိုတာ သေချာအောင် ကြည့်ပါဦး´
ခဏကြာ တိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်။ နောက်တော့ သေနတ်ပစ်သံ တစ်ချက် ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒီ မုဆိုးရဲ့ အသံက ဖုန်းလိုင်းပေါ်မှာ ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ ပြီးတော့မှ သူက ပြောလိုက်ပါတယ်။ `အဆင်ပြေသွားပါပြီ။ ခုကော ဘာဆက် လုပ်ရဦးမှာလဲ´
« Last Edit: June 18, 2011, 03:28:46 PM by tunaye2011 »